Bandhigyo & Aqoon isweydaarsiyo
Barnaamijka Burlington Parallel Justice wuxuu ku siin karaa aqoon isweydaarsiyo iyo bandhigyo kooxdaada ama ururkaaga!
Isbarbar dhigga Caddaaladdu waxay taageertaa dadka la kulmay dhibbaneyaasha denbiga iyo waxyeelooyinka gaarka ah, iyo sidoo kale kobcinta bulshooyinka nabdoon ee awood u siiya deriska iyo martida inay yareeyaan dembiga iyo waxyeellada. Waxaan ku dadaalnaa inaan carqaladeyno dabeecadaha, dabeecadaha, iyo aaminsanaanta sii wadaysa wareegyada rabshadaha. Waxaan si joogto ah u raadineynaa dadaalkeena si aan ula kulanno baahiyaha bulshooyinka kala duwan ee Burlington iyo Chittenden County.
Bandhigeena, aqoon isweydaarsiga, guddiga, iyo mowduucyada tababarka waxaa ka mid ah:
Hordhac ku wajahan Caddaaladda isbarbar socda iyo Adeegyada Dhibbanayaasha Gaarka ah
Adeegyada Dhibbaneyaasha ee Dhaqtarka Dhaqan Celinta
Naxariis iyo Khibrad Dhibbanaha
Dhibbane Dembiile ahaan, Dembiile ahaan Dhibbane: Ka saarista Binary
Adeegyada Dhibbanayaasha ee loogu talagalay Bulshooyinka Mareykanka, Qaxootiga, iyo Soogalootiga ah
Aqoonta Dhaqanka ee Bixiyeyaasha Adeegyada Dhibbanaha
Cadaalada Bulshada iyo Adeegyada Dhibanaha
Caafimaadka Maskaxda iyo Adeegyada Dhibbanayaasha
Maandooriyaha iyo Adeegyada Dhibbanaha
Abuuritaanka Barnaamijka Adeegyada Dhibbanayaasha ee Isbarbar Dhigaya (ka bilow inaad hubiso Hagahayaga Hirgelinta! )
Si aan fikrad fiican uga helno sida ugu wanaagsan ee aan ugu adeegi karno adiga iyo kooxdaada, waxaan haynaa su'aalo qaar . Waxaan higsaneynaa inaan buuxino baahiyahaaga, markaa fadlan noqo mid dhameystiran oo daacad ah!
Waxaan ku dadaalaynaa inaan ka jawaabno dhammaan codsiyada 48 saacadood gudahood, laakiin waxaan xor u nahay inaan taleefan kuula xiriirno haddii jadwalkaas uusan kuu shaqeynaynin: 802-264-0764 (Kim Jordan, Xiriiriyaha Dhibanaha & Khabiirka Cadaaladda) kjordan @ burlingtonvt .gov
Isbarbar dhigga Cadaaladda / Foomka Aqoon isweydaarsiga